दुबईमा जागिरहरू दुबई र अबू धाबी मा उपलब्ध छ
हामी अब भर्ती भएका छौं - दुबई र अबु धाबीमा रोजगार उपलब्ध छन्! 🥇
दुबईमा भर्ती - संयुक्त अरब अमीरात 🥇
पाकिस्तानका लागि संयुक्त अरब अमीरातको लागि रोजगार ⭐⭐⭐俊⭐
डिसेम्बर 13, 2017
दुबई भर्ती मा नौकरी - हामी अब भर्ती गर्दैछौं
नौकरी मा दुबई भर्ती को लागि expats। यस संग ध्यान मा, हाम्रो टीम, नयाँ कामदारलाई सहयोग पुर्याउँदछ। विशेष गरी राम्रो अनुभव भएको एक। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं विदेशमा काम खोज्दै हुनुहुन्छ। र भएको धेरै वर्षको अनुभव। हाम्रो भर्ती टीम तपाईलाई मद्दत गर्न तत्पर छ। नकारात्मक पक्षमा, विदेशमा कामदारहरू। जोसँग पर्याप्त अनुभव हुन सक्दैन। अझै सक्छ सुरक्षा क्षेत्रमा उदाहरणका लागि रोजगारी खोज्नुहोस्। तर यो धेरै समय लागु हुनेछ।
हामी तपाईंलाई दुबईमा काम गर्दछौं!
CV अपलोड गर्न तस्वीरमा क्लिक गर्नुहोस्
दुबई र अबू धाबी मा क्यारियर उपलब्ध छ!
दुबई भर्ती मा नौकरी - दुबई सिटी कम्पनी, हामी अब दुबई को भर्ती गर्दै छन् !. तथ्यको रूपमा, हाम्रो कम्पनीमा छ तिब्बती र अबू धाबी मा काम उपलब्ध छ। आज तपाईंको अपडेट गरिएको सीभीको साथ नयाँ क्यारियरको लागि आवेदन दिनुहोस्! दुबई शहर र अबु धाबी सामान्यतया बोल्दै ठूलो बढ्न को एक वर्ष पछि धेरै रोजगार रिक्त पदहरूको साथ। ती परिस्थितिहरूमा, एमिरेट्स प्रगति भयो तेल मूल्य संग। यी दिनहरू GCC क्षेत्र अन्ततः प्रबन्ध गर्न सुरू भइरहेको छ एक्सटेट्सका लागि धेरै राम्रो कामहरू र विदेशीहरूको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो।
अन्तिम विश्लेषणमा, हाम्रो टीम काम खोजी सेट गर्नुहोस् बढ्दो लागि स्थिरीकरण कार्यक्रम रोजगारका लागि सम्भावना र रोजगारीको अवसरहरू। यी बिन्दुहरूलाई दिइन्छ, हामीसँग नयाँ जागिरको सृजनात्मक प्रक्रिया छ 2018 मा हरेक नौकरी खोज्ने को लागी.
हालको समय सम्म दुबई शहर कम्पनीले 950 भन्दा बढी रोजगारदाताहरूको सर्वेक्षण लिन्छ संयुक्त अरब एमिरेट्स भर। त्यसो भए अग्रभूमिमा हामीले यसका लागि केही सुझावहरू सिर्जना गरेका छौं रोजगारी दुबईका लागि भारतीय.
थप कम्पनीहरू दुबई को लागी यस वर्ष विस्तार सिर्जना, केहि आश्चर्यजनक फर्महरू काम कटौती योजना बनाउँदै।
एक तेल र ग्यास क्षेत्र भित्र निर्माण निर्माण अझै पनि शारजामा बढ्दै दुबई, तर एक धीमी गति देखि अबू धाबी मा।
दुबईमा 35,000 कम्पनीहरू भन्दा अधिक छन् नौकरी पोर्टल र भर्ती एजेन्सीहरु लाई भर्ती गर्दछ.
हामी दुबईमा जागिर प्रदान गर्छौं फिर्तीको लागि भर्ती दुबई सिटी कम्पनीसँग।
दुबई भर्ती मा नौकरी - दुबई सिटी कम्पनी
दुबईमा सेयरहरू - रोजगार पाउनको लागि एक पूर्ण गाइड
दुबईमा रोजगार यो सबै सपनामा क्यारियरको बारेमा हो जुन तपाईं पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यद्यपि यो नयाँ हुन सक्दछ यदि यो नयाँ हुन सक्छ संयुक्त अरब अमीरातमा रोजगारीको अवसर। दुबई सिटी कम्पनी तपाईंको लागि शुभ समाचार छ। त्यहाँ धेरै छन् शहरमा धेरै नौलो रिक्त पदहरू र ती भन्दा फरक छन्। जहाँसम्म, एक चीजको लागि, काम गर्ने वातावरण र कामको समय हुन सक्छ तपाईको जन्मभूमि भन्दा धेरै फरक छ। इंगित गर्न दुबईमा कार्य खोजी प्रक्रिया हाम्रो लेखमा हेर्नु भएको छ हामीले हामीले जान्नु पर्ने सबै कुरा लेखेका छौं दुबईमा काम कसरी गर्ने.
नयाँको लागि उत्कृष्ट समाचार दुबई र अबू धाबी मा नौकरी तलाशने वालों। हरेक क्यारियर शिकारीको लागि अर्को कुञ्जी बिन्दु जसले राम्रो कौशल लिन सक्छ संयुक्त अरब अमीरातमा राम्रोसँग सशुल्क काम प्राप्त गर्नुहोस्। एउटा कुराको लागि, मान्छे जो भर्खर दुबई आएका थिए र नयाँ क्यारियर विचारहरूको लागि खोलियो। तपाईलाई थाहा पाउनु पर्छ कि तपाई कुन काम खोज्दै हुनुहुन्छ संयुक्त अरब एमिरेट्समा जानका लागि। हाम्रो टीम मुनि केही सुझावहरू औंल्याउँछ जहाँ तपाईले फेला पार्न सक्नुहुन्छ मध्य पूर्व को सर्वश्रेष्ठ साइटहरु। यी वेबसाइटहरूले तपाईंलाई दुबई शहर र अब्बाहिरीमा पदस्थलको ठूलो दायरामा ताजा सोच लिन सक्षम पार्छ। दुबईमा जागिरहरू मध्य पूर्वमा सफलताको लागि भर्ती तपाइँको कुञ्जी हो.
हामी अब भर्ती गर्दै छौं!
उत्तम प्रयोगकर्ताको द्रुत दृश्य प्राप्त गर्नुहोस् मध्य पूर्वमा क्यारियर बजारमा रोजगार पोर्टलहरू। हामी पनि प्रदान गर्न धेरै सहयोगी हुन कोशिस गरिरहेका छौं प्रत्येक नौकरी खोजकर्ताको लागि मूल्यवान जानकारी। सामान्यतया, हाम्रो मिशनले तपाईंलाई कुन कम्पनीहरू देखाउँछ? संयुक्त अरब अमीरात मा भर्ती को लागि सर्वश्रेष्ठ.
नकारात्मक पक्ष मा, त्यहाँ छ धेरै धेरै लोकप्रिय काम साइटहरू। तिनीहरू मध्ये केही सुपर लोकप्रिय हुन्छन्, ताकि तपाईं आफैले सयौंको बिरूद्ध आफैलाई भेट्टाउनुहुनेछ उम्मेदवारहरू र तपाईं ठूलो कतारमा हुनेछन्। तर ती परिस्थितिहरूमा, तपाईंको कहिल्यै नबिर्सनुहोस् व्हाट्सएप मा नौकरी को शिकार किनभने तपाईं सबै एकैको लागि जाँदै हुनुहुन्छ दुबई शहर मा क्यारियर पथ.
हाम्रो उद्देश्य जहाँ तपाइँ फेरि अपलोड गर्न पुन: सुरु गर्न देखाउनुहुन्छ दुबईमा उच्चतम सशुल्क काम फेला पार्नुहोस्. दुबई मा नौकरी मा मध्य पूर्व मा भर्ती.
दुबईमा शीर्ष नौकरी पोर्टल साइट संयुक्त अरब अमीरात र दुबईका सेयरका लागि?
मेरो नौकरी खोज मा कानूनी कम्पनी
दुबई शहर कम्पनी
# नहीं 1 सबै भन्दा राम्रो कम्पनी - शीर्ष: नौकरी साइट को लागि संयुक्त अरब अमीरात मा क्यारियर र भर्ती सेवा.
दुबई सिटी कम्पनी - नौकरिहरु दुबई - विजेता कम्पनी र नम्बर 1 युएईमा क्यारियर प्रदायक। हामी यस बारे लेखिरहेका छौं युएईमा के हुँदैछ भनेर.
दुबई सिटी कम्पनी नौकरी साइट हो नौकरी खोज मार्केट वेबसाइट मा प्रमुख खेलाडी। सामान्यतया, हाम्रो वरिष्ठ भर्तीहरू यहाँ छन् दुबई मा अन्य नौकरी चाहने को मदद को लागि। अन्तिम विश्लेषणमा, तपाईं नौकरी शिकारीको रूपमा भर्तीबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो धेरै क्यारियर चाहने र भारतबाट जागिर खोज्नेहरू आउँछन्, पाकिस्तान, साथै सऊदी अरब। अर्कोतर्फ, काम खोज्दै दुबईमा विदेशी क्यारियर बजार भर्ती एजेन्टहरू र द्वारा शहर केन्द्रहरू व्यावसायिक भर्ती, रोजगार र कामका लागि मध्य पूर्व मा वातावरण.
दुबई सिटी कम्पनी - हामी दुबई मा नौकरिहरु को लागि एक कानूनी वेबसाइट हो
उस्तै टोकनमा, हाम्रो वेबसाइटले प्रदान गर्दछ एक उच्च वेतन स्तरीय दुबई मा नौकरी। यसबाहेक, हामी उन्नत प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छौं तपाइँलाई सपनाको जागिर जम्मा गर्न मद्दत गर्न। संयुक्त अरब एमिरेट्स अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार शिकारीहरू र युरोप क्यारियर खोज्नेहरूको लागि सबैभन्दा मनपर्दो र खोज्न योग्य सपना राष्ट्रहरू मध्ये एक हो। दुबई शहर उत्तम एक्सटेट गन्तव्य हो र तीमध्ये धेरैले निर्माण उद्योगमा आधारभूत जागिर प्राप्त गर्ने नवीनतम अनुभवलाई कार्यान्वयन गर्दछ।
यस कारणको लागि, हाम्रो टोली एक हो सर्वोच्च अदालतमा राख्नु। साथै भर्ती सेवा अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो टीम सबै जीसीसी देशहरु मा अधिक धेरै क्यारियर अवसरहरु प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं मार्केटिंग क्षेत्र मा एक डिग्री छ तपाईं सक्नुहुन्छ हाम्रो लागि धेरै राम्रो उम्मेद्वार बन्नुहोस्। हाम्रो कम्पनी सेवाहरूको परिणाम स्वरूप, हामी विशेष गरी भारत, फिलिपिन्स, साउदी, कतार, पाकिस्तान नौकरी शिकारीहरू। यसैले, फलस्वरूप प्रत्येक क्यारियर खोजकर्ताहरूको लागि जो दुबईमा आफ्नो सपनाको खोजी खोज्दैछन्। हामी संयुक्त अरब अमीरातमा शीर्ष दर्जा प्रदान गर्दछौं। दुबईमा जागिरहरू दुबई सिटी कम्पनीसँग भर्ती सम्भव छ।
तपाईंको समय बर्बाद गर्न तपाईंले निश्चित रूपमा आफ्नो पुन: सुरू अपलोड गर्नुपर्दछ र परिवर्तन कार्यक्रमको लागि उत्तम फिट प्रयास गर्नुहोस्। दुबई सिटी कम्पनीले सामाजिक मिडियामा आश्चर्यजनक भर्ती सेवाहरू प्रदान गर्दछ। र अझ बढि। हामी मुम्बईमा भर्ती गर्दैछौ र अन्तर्राष्ट्रिय।
दुबईमा जागिरहरू दुबई सिटी कम्पनी
दुबई शहरमा हामी खोज्ने उत्तम काम हो।
अन्य शीर्ष5कम्पनीहरु - दुबई शहर मा नौकरी को रिक्तियों को खोज को लागि
सकारात्मक ऊर्जा र जीवनशैली - दुबई शहर कम्पनी
बेट - संयुक्त अरब अमीरात मा प्रमुख कैरियर पोर्टल
नम्बर2Bayt.com
सबैजना कुरा गर्दै दुबईमा काम कसरी गर्ने?। बेल्ट सम्झने पहिलो कुराको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय नौकरी साइटहरू मध्ये एक हो खाडी देशका नौकरीका अवसरहरू। इंगित गर्न यो रोजगार साइटले साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स समावेश गर्दछ, ओमान, यमन, कुवेत, कतार, र बहराइन। र तपाइँ अरू देशहरूबाट पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। बाइट विज्ञापन अनगिन्ती रोजगारहरू लगभग हरेक दिन प्रस्ताव गर्दछ.
यदि तपाईं ती कठोर मध्ये एक हुनुहुन्छ भने अधिक सम्भावना प्रमाणहरू रोजगारीको खोजी खोजी। सामान्यतया बोल्दै, तपाईले बिहान हरेक नयाँ रोजगारदातालाई पठाउनु पर्छ। लामो समयान्तरमा, तपाइँले तपाइँको सपनाको स्थानहरू भेट्टाउने आशाको साथ हरेक साँझ त्यो गर्नुपर्छ। यो पोर्टल भारतीयको लागि दुबईमा रोजगारको लागि उच्च मूल्या highly्कन गरिएको छ।
अधिकांश काम खोज्नेहरू युएई लाई माया गर्नुहोस् कि त्यसले तपाईंको जीवनलाई बदल्न सक्छ। युएईमा यस दुबई कम्पनीले दिन र रात भरि नयाँ जागिरहरूको लागि जागिर खाली पोष्ट गर्दछ। तसर्थ तिनीहरूको राम्रो रोजगारी रिक्त पदहरू युएई-आधारित छन्। नकारात्मक पक्ष मा किनभने तिनीहरू ठूला छन् त्यसैले तपाईं पनि शायद साउदी अरबका अवसरहरू भेट्टाउनुहोस्। उत्तर अफ्रिका र यहाँसम्म कि पाकिस्तान र श्रीलंका। तर यस प्रकारको रोजगारीका अवसरहरू पाउन सजिलो छैन.
Gulftalent - बाहिरको लागि सर्वश्रेष्ठ क्यारियर साइट
No .3 Gulftalent.com
यो काम पोर्टलसँग, आश्चर्यजनक रूपमा तपाईं आफ्नो व्यावसायिक पुन: सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका राख्नुहोस्, चाँडो एक पेशेवर प्रोफाइल सिर्जना गर्यो तपाईंलाई गल्फटालेन्ट सीवी बिल्डर प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ। यस कारणका लागि, उनीहरूको व्यावसायिक ढाँचा CV र प्रोफाइल प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको काम खोज्नको लागि कहिँ पनि। नमूना CV को केहि वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
Gulf-talent दुबई-आधारित भर्ती नौकरी साइट पोर्टल हो। यो दुबई कम्पनी खाडी देशहरूबाट ताजा प्रभावकारी 4,000 कम्पनीहरू सूचीबद्ध गर्दछ। फलस्वरूप क्यारियर शिकारी र भर्ती प्रबन्धकहरू नयाँ प्रतिभा खोज्नका लागि तिनीहरूको सेवाहरू प्रयोग गर्दै। अर्को शब्दमा, दमण, एडीसीबी र इथस्टाट सहित केही ठूला ठूला पसलहरू छन्।
यो दुबई होस्टिंग कम्पनी खाडी क्षेत्र भित्रको पहुँचको पहुँच प्रदान गर्दछ। यद्यपि तपाई र अधिक भेट्टाउनुहुनेछ खाडीमा रोजगारीका अवसरहरू यदि तपाईं युएईमा मात्र रोजगार खोज्दै हुनुहुन्छ भने। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, त्यहाँ केहि कार्यकारी पदहरू छन् जुन तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र रोक्न सक्नुहुन्छ दुबईको सपना देख्दै.
MonsterGulf - जीसीसी देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय करियर पोर्टल
Monstergulf अन्तर्राष्ट्रीय भर्ती कम्पनीहरु को एक शाखा को प्रबंधन। राक्षस एक धेरै प्रयोगकर्ता को अनुकूल काम पोर्टल हो। तपाईले नयाँ क्यारियर खोज्ने हुनाले, कामहरू उपलब्ध छन् धेरै मोटर वाहन क्षेत्रहरू। अर्को शब्दहरुमा, राक्षस खाडीले प्रवासीहरुलाई निर्माण र बैंकिंगको साथ रियल ईस्टेटमा मद्दत गर्दछ। त्यो भनेको यो क्यारियरको साथ हो र रोजगार वेब पृष्ठ समारोह द्वारा रोजगार खोज गर्न यो सम्भव छ, क्षेत्र वा उद्योग। यस क्यारियर साइटले अनलाईन रोजगार अनुप्रयोग नयाँ एक्सप्याट्सलाई डाटाबेसमा सीभी अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ र सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्दछ दुबईमा कार्यका लागि कसरी आवेदन.
Charterhouse दुबई शहरमा भर्ती क्यारियर साइट
यो एजेन्सीमा चलिरहेको छ मध्य पूर्व, र निस्सन्देह, संयुक्त अरब अमीरात भित्र विभिन्न विविधता उद्योगहरुको लागि भर्ती। एउटै टोकनमा, यो कम्पनीले संयुक्त अरब अमीरातमा 2004 बाट सञ्चालन सुरु गर्छ। Charterhouse एक्सटेट मान्छे को लागी जो स्थानहरु खोज्दै छन दुबईमा पहिलो वा दोस्रो कार्यको लागि। अर्कोतर्फ, तिनीहरूका धेरै भूमिकाहरू जुनियर सामान्य पोष्टहरूको सट्टा अधिक अनुभवी पेशेवरहरूका लागि हुन्। तिनीहरू पनि धेरै कार्यकारी मा विशेषज्ञ आला भूमिका र ईन्जिनियरिंग रोजगार को लागी भर्ती.
माइकल पेज - नौकरिहरु दुबई साइट मा संयुक्त अरब अमीरात मा
N0.5 माइकल पेज
एकै समयमा, माइकल पेज कम्पनी एक ग्लोबल हो विशेषज्ञ भर्ती संगठन। वास्तवमा यस कम्पनीले दुबई शहरको बजारमा दृढतापूर्वक स्थापना गर्‍यो। नतीजाको रूपमा, तिनीहरूको विश्वभरि कार्यालयहरू छन्। यद्यपि यो उत्तम माइकल पृष्ठ हुन सक्छ उत्तम देशहरू र शहरहरू सहित भर्ती उद्देश्य को लागी। जस्तै जापान र आयरल्याण्ड र अष्ट्रेलियाको साथ। थप रूपमा, ती तपाईंलाईaमा राख्न सक्दछन् पदहरूको दायरा एमिरेट्स एयरलाइन्समा निर्देशक बोर्ड स्तरमा प्रवेश रोजगार बाट।
दुबईमा जागिरहरू - अद्वितीय हुनुहोस् र नयाँ क्यारियर पत्ता लगाउनुहोस्!
यसबाहेक, यदि तपाईं संयुक्त अरब अमीरातमा बस्न चाहानुहुन्छ भने, यो हो प्रत्येक सम्पतिको लागि उत्तम विकल्प तिनीहरूको स्थानीय विशेषताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न। जसमा वित्तीय सेवाहरू, एमिरेट्स भित्र बिक्री र बजारमा मध्यम व्यवस्थापन क्षेत्र भूमिका समावेश छन्। यातायात, निर्माण र निर्माण उद्योग र किनारहरूको बाहिर.
हामी अहिले सरकारी कम्पनीहरूको भर्ती गर्दैछौ
नौकरी मा दुबई भर्ती को लागि expats
संयुक्त अरब अमीरात मा सरकारी कम्पनीहरु को जाँच को लायक
एक दशक भन्दा पहिले सरकारी कम्पनीहरूले मूल रूपमा अबू धाबी र दुबई शहरमा धेरै राम्रो कम्पनीहरू स्थापना गरे। यसबाहेक, तिनीहरूसँग पनि छ सम्पूर्ण GCC देशहरूमा विस्तार भयो र त्यहाँ बढि व्यापार गर्नुहोस्। विज्ञापन गरिएका अधिकांश रोजगारहरू दोहा, दुबई र क्यापिटलमा आधारित छन् रियाद। त्यसैले तिनीहरू वित्तीय उद्योगमा ठूलो छन् र उनी संयुक्त अरब अमीरातमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले तुलनात्मक यदि तपाईं होटेलको कामका लागि पेशेवर एक्सटेट हुनुहुन्छ वा तेल र ग्यासमा कार्यकारी ईन्जिनियरि specialist विशेषज्ञ। यसका साथै निर्माण, ईन्जिनियरि।, बैंकिंग, आईटी वा खुद्रा उद्योगहरू। तपाईंले गर्नु पर्छ त्यहाँ रोजगारीका लागि खोजी सुरु गर्नुहोस्। यी आश्चर्यजनक कम्पनीहरू को प्रयास गर्न लायक हो।
एक्सपो 2020 क्यारियर दुबई मा
एक्सपो 2020 बढ्दो युएईको प्रकाशमा। क्यारियर बजार र दुबई शहरको विकास। वास्तवमा भन्ने हो भने, तपाईंले मध्य पूर्वको अन्वेषण गर्नुपर्छ कार्य बजार र एक्सपो 2020 यसलाई गर्नका लागि एक उत्तम तरिका हो। अर्कोतर्फ, तपाईं एक हिस्सा हुन सक्नुहुन्छ एक्सपो 2020 दुबई क्यारियर यात्रा को रोजगार र स्वयंसेवक अवसर को विस्तृत रोजगार दायरा को देख्न सकिन्छ।
एक्सपोको क्यारियर उपलब्ध छ असाधारण व्यक्ति र स्मार्ट समेट्नेहरूको लागि। यसलाई अर्को तरिकामा राख्नको लागि, यदि तपाईं एक्स्पो एक्सएनयूएमएक्स एचआर टीममा सम्मिलित हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं ऊर्जावान व्यक्ति हुनुपर्छ। नयाँ स्थिति को लागी अत्यधिक प्रेरित र तपाईंको नयाँ टीमको साथ एक व्यक्तिलाई प्रेरित गर्नुभयो।
त्यहाँ 1,000 भन्दा धेरै छन् गृहमन्त्री 2018 मा तपाईंको लागि दुबईमा जागिरहरू। तपाईं एक प्रविष्टि स्तर नौकरी खोज्ने हो ?. वा उच्च स्तरका कार्यकारी क्यारियर खोज्दै हुनुहुन्छ ?. आन्तरिक सेवकाई उत्तम छ। सामान्यमा, 1,200 नौकरी रिक्त स्थानहरू दुबई शहर भित्र विभिन्न विभागहरूमा भरिएको छ। र तिनीहरूमध्ये धेरै राम्रा भुक्तानीमा छन् रोजगार क्षेत्र। यदि तपाईं काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ लागू गर्नुहोस् सरकारी कार्यहरू संयुक्त अरब एमिरेट्समा। तपाईंको पुनःसुरु अपलोड गर्नुहोस्: यस उद्योगहरूमा तपाईंको रिज्युमे थप्नुहोस्। अनि तेस्पछि दुबई शहरमा तपाईंको समय स्पिडिंगको बारेमा बढि जान्नुहोस्.
दुबई सरकार मानव संसाधन विभाग विभागले तपाईंलाई खोज्छ।
दुबई सरकार सही उम्मेदवारको लागि मानव संसाधन विभाग क्यारियर को लागी। यस अवस्थामा यस अवसरको उद्देश्य दुबैमा Expats एक राम्रो स्थिति मान्छे बन्न गरौं। नगरपालिकाले यसको परिवार व्यवसायमा तपाईको रोजाईलाई प्राथमिकता दिन्छ र उनीहरूमा सामेल हुने उत्तम तरिका भनेको यसको मार्फत आधारभूत उद्देश्यहरू जान्नु हो मान दुबई सरकार द्वारा बनाईएको। त्यहाँ केही मात्र तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ “उत्तरदायित्व, प्रतिस्पर्धात्मकता, सहयोग अभिनव, पारदर्शिता, र खुशी"।
सरकारसँग सम्बन्धित कामहरू तपाईलाई न्यूनतम हिट गर्न आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, तपाईंलाई एक हुनु पर्छ एक विशेषज्ञ रिक्तिको लागि एमबीए शिक्षा.
TECOM समूह मा क्यारियर
TECOM समूह मा रोजगारीका अवसरहरूको दायरा प्रदान गर्दछ दुबई सिटी, र यो कम्पनी केवल एक ठूलो सम्झौता हो। योग्य व्यक्तिहरूबाट ताजा स्नातक हुनको लागि नयाँ उम्मेदवारहरू पाउने उद्देश्यका लागि। टेकोम समूहले एक्सप्याट्स र स्थानीय रोजगार खोजी गर्नेहरूलाई सही कौशल सेटको साथ रोजगार दिन्छ। उम्मेदवार जो व्यक्तिगत योग्यता र गुणहरू छन् सजीलै तिनीहरू संग काम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
टेकम समूहले भारत, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र मध्य पूर्वबाट बहुसांस्कृतिक प्रतिभा पोखरी प्रयोग गर्दछ। यसलाई अर्को तरिकामा राख्नको लागि कम्पनीले क्यारियर खोजीकर्ताहरूलाई सक्षम गर्दछ दुबई संस्कृतिको बारेमा बिभिन्न तरिकाले सोच्न र सेवाहरू। पछिल्लो 20 वर्षमा, कम्पनीले प्रतिस्पर्धी दिन्छ हरेक क्यारियर शिकारीलाई। दुबईमा विश्वव्यापी बढ्दो बजारमा कडा ध्यान दिएर। कम्पनी जीसीसी देशहरूमा धेरै प्रभावकारी लगानी गर्दछ अचम्मको कम्पनीहरूको साथ र यदि तपाईं सहि व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईं व्यवस्थापक हुनुहुनेछ।
यस कारणका लागि, 2018-2019 मा TECOM समूहले दीर्घकालीन लगानी सिर्जना गरेको छ। सामान्यतया, कम्पनी भित्र उपलब्ध धेरै संख्याहरू भर्न तयार छन्। यो राम्रोसँग परिचित छ दुबई शहर दुबई मा सबै स्तरहरु मा विभिन्न कार्य र expats रोजगार। संक्षिप्त गर्न तपाईले तपाइँको अपडेट गरिएको पाठ्यक्रम Vitae पठाउनुपर्नेछ टेकम ग्रुपको उद्घाटनका लागि विचार गर्नका लागि, कृपया दुबई होल्डिङ करियर भ्रमण गर्नुहोस् विवरणहरू अपलोड गर्न।
दुबई सिटी कम्पनी संग दुबई भर्ती मा नौकरी। नौकरी खोजकर्ताहरूको लागि उत्तम कम्पनी!
दुबई मा दुबई होल्डिंग संग नौकरी
यी बिन्दुहरूलाई दिईयो, सिधा आवेदन गर्नुहोस् दुबई होल्डिङ र दुबई होल्डिंगको साथ "गव" अय्यूब पाउनुहोस्। तपाइँ दुबई सिटी होल्डिंगमा तपाइँको पुन: रिजमलाई अनलाइन पठाउनु पर्छ। हालको समय, यो वैसे पनि छ सबै भन्दा राम्रो कम्पनीलाई खाडी देशमा काम गर्न। यस द्रुत मा, तपाईं पनि तिनीहरूको कम्पनीबाट सतर्कता सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ। अन्ततः दुबई रोजगारदाताहरूबाट क्यारियर अनुरोध र प्रश्नहरू प्राप्त गर्नुहोस्। दुबईमा प्रत्यक्ष सरकारी भर्तीकर्ताहरूको पहुँच। तपाईं युएईको सरकारी पृष्ठहरूमा तपाईंको पुनःसुरु अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
दुबई होल्डिंग ग्रुपमा स्वागत छ - दुबई होल्डिङ दुबई सिटी कम्पनी संग दुबई भर्ती मा नौकरी।
अब तपाइँ दुबई होल्डिङको साथ कार्यका लागि आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रबन्धकहरू सँग व्यापार समुदायहरू, आतिथ्य, पर्यटन, अचल सम्पत्ति र दूरसंचारमा ध्यान केन्द्रित कम्पनीहरुको पोर्टफोलियोसँग व्यापक क्यारियर अनुभव छ र शिक्षण उद्योग सम्बन्धी क्यारियर.
2009 पछि दुबई होल्डिंगले विभिन्न उद्योगहरूमा क्यारियर र रोजगारीको अर्थव्यवस्थालाई विविधीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सामूहिक रूपमा, ती कम्पनीहरूले 12 उद्योगहरूमा सामेल हुने प्रतिनिधित्व गर्दछ, लगातार ड्राइविंग समर्थन र टिकाऊको विकास, 2021 को लागी संयुक्त अरब अमीरात भिजनसँग मिल्दोजुल्दो नवीनताको नेतृत्वमा रहेको अर्थव्यवस्था.
यदि तिमी हो अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेदवार र क्यारियर खोज्दै जसले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू, व्यापक प्रशिक्षण र विकास दुबई होल्डिङसँग काम गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ मार्केटिंग करियर तपाईंको लागि हो। तपाइँको नयाँ क्यारियर सुरु गर्नुहोस् रaको भाग बन्नुहोस् दुबई शहरमा द्रुत गतिशील र चुनौतीपूर्ण वातावरण। दुबई होल्डिंगमा तपाईको रिजुमे पठाउनुहोस्।
हामी अब दुबईको लागि भर्ती गर्दै छौं!
याद राख्नु पर्ने अर्को कुरा यो हो दुबईमा अपराधको दर एकदम कम रहेको छ। त्यसो भए यो दिमागमा राखेर के तपाई एउटा खोज्न चाहानुहुन्छ दुबईमा काम यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ हामी तपाईं एक युवा परिवार छ भने पनि मद्दत गर्न सक्दछौं। तपाईं मा नयाँ क्यारियर सुरु गर्न यूएई!
पुन: सुरु गर्नुहोस् पृथ्वीमा सबैभन्दा छिटो बढ्दो शहरमा! - दुबई सिटी